Halkan ayaad ka akhrisan kartaa wax dheeraad ah oo covid-19 ku saabsan
Gobolka bogga xagiisa sare ka dooro si aad ugu hesho macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan wax halkaad joogto khuseeya.
Waxa muhiim ah in waxbadan la cabo, gaar ahaan haddii aad xumad ama qufac leedahay. Waxa wanaagsanaan karta in waxoogaa biyo kulul ama biyo qabow aad cabto haddii uu cunahu ku xanuunaayo.
Cab tusaale ahaan biyo, shaah, maraq la fadhiisiyey ama maraq.
Waxay taasi ku caawineysaa haddii aad wax badan qufacayso.
Waxaad u baahan tahay inaad nasato markaad jiran tahay. Laakiin ma fiicna inaan wakhti badan dhaqdhaqaaq la sameynin/la iska jiifo.
Waxa ka fiican haddii la isku dayo in dhaqdhaqaaq la sameeyo.
Iskuday inaanad sigaar cabbin ama inaad joogto goob ay dadka kale sigaar ku cabayaan. Qufaca ayaa qiiqa kaaga sii daraaya.
Qofka u baahan inuu guriga wax badan joogo
Cidla ayaa la dareemi karaa in wax badan guriga la joogo. Dad badan ayaa u arka inay wax adag tahay inaan lala kulmin dadkaad badanaa la kulmi jirtay.
Isku day inaad xidhiidh la saaxiibadaa iyo qoyskaaga tusaale ahaa waad isa soo wici kartan:
Wac lambarka 1177 haddii aad rabto in lagaa caawiyo waxaad sameynayso. Cidda ka jawaabeysaa waa kalkaalisooyin. Waxay sidoo kale adiga kaa caawin karaan halka aad daryeel ka raadsaneyso, haddii kaas loo baahdo.